किशोर पहाडीको रमाइलो बाल्यकाल – Ketaketi Online
बालखकालको सम्झना गर्दा आफ्नो स्वर्णकालको सम्झना हुन्छ । ‘स्वर्णकाल’ भनेको उज्यालो समय हो । बालखकालमा हामी अबोध हुन्छौँ । ‘अबोध’ भनेको केही पनि नजान्ने हो । बालखकालमा हामीले केही जानेका हुँदैनौँ । त्यसैकारण होला मेरो स्कूले जीवनको पहिलो दिनको सम्झना गर्दा म कति अबोध रहेछु भनी छक्क पर्छु ।
मैले पढेको पहिलो स्कूल हो- काठमाडौँको डिल्लीबजारमा अवस्थित “विजय मेमोरियल हाईस्कूल” । त्यहाँ म ६ वर्षको उमेरमा २ कक्षामा भर्ना भएको थिएँ जस्तो लाग्छ । यो वि.सं. २०१९ सालतिरको कुरा हो । स्कूलको पहिलो दिनमा मेरो मनमा धेरै नै डर थियो । नयाँ ठाउँको डर, नयाँ वातावरणको डर, नयाँ मान्छेहरूको डर, नयाँ शिक्षकहरूको डर ।
हामी सुकुलमा बसेर पढिरहेका थियौँ । कक्षामा कुनै शिक्षकले पढाइरहनु भएको थियो । अचानक मलाई सुसुले च्याप्यो । तर डरले गर्दा मैले शिक्षकलाई “म ट्वाइलेट जान्छु” पनि भन्न सकिनँ । कहिले कक्षा सिद्धिएला र जाउँला भनी कुरेर बसिरहेँ । मलाई किन हो किन शिक्षकसँग डर लाग्यो ।
धेरै नै बेर भएपछि पनि कक्षा चाहिँ सिद्धिएन । मैले सुसु रोकेको रोक्यै गरेँ । हुँदा हुँदा हुँदा हुँदा…धेरै नै बेर भएपछि…मैले सुसु रोकिराख्न सकिनँ । सुकुलमा बसेकोबस्यै मेरो सुसु फुस्क्यो । सुकुल जम्मै भिज्यो । अनि म उठेँ । शिक्षककहाँ गएँ र बडो साहसका साथ भनेँ- “मलाई सुसु आयो, सर !”
म त्यसरी उठ्दा कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीले मेरो भिजेको कट्टु देखे । अनि “लौ यसले त … … सुसु गरिसकेछ, सर” भनी सबै जना हाँस्न थाले । मलाई लाज लागेर आयो ।
एकजना शिक्षकले सोध्नुभयो- “जनावरहरूमा सबैभन्दा उफ्रन सक्ने जनावर कुन हो ? “
म यति अज्ञानी र अबोध थिएँ कि यस प्रश्नको जवाफ मैले झवाट्ट दिइहालेँ- “…फट्याङ्ग्रा…”
एक दिन त्यसरी नै घुम्न निस्कँदा हामीले बाटोमा कुनै चीज भेट्यौँ । “बच्छीः मबिया… बच्छीः मबिया…” भन्दै मैले त्यो चीज उठाएँ ।
हामी बालखकालमा कुनै चीज भेट्टायौँ भने “बच्छीः मबिया… बच्छीः मबिया…” भन्थ्यौँ । र, त्यसो भन्दा हामीले त्यो चीजलाई आधा आधा पार्नु पर्दैनथ्यो । नेपाल भाषामा ‘ बच्छीः’ भनेको ‘आधा’ र ‘मबिया’ भनेको ‘दिन्नँ’ भनेको हो ।
तर त्यसोभन्दा पनि रविन्द्रले “हुन्न हुन्न…मलाई पनि चाहिन्छ” भन्न थाल्यो ।
म ‘दिन्नँ’ भन्ने, ऊ ‘चाहिन्छ’ भन्ने । दुवैजना एक छिन कराइरहृयौँ । अन्तमा हामीले आधा आधा पार्ने नै निधो गर्‍यौँ । छेउको एउटा ढुङ्गा टिपेर ढ्याङ ढ्याङ हान्यौँ र त्यो एयरफोन फुटायौँ ।